Backlinks जेनरेटर dofollow को प्रयोग गरेर एक लाभदायक बैकलिंक प्रोफाइल कसरि बनाइयो?
सबै वेबसाइट मालिकहरू उनीहरूको अनलाइन व्यवसायलाई सम्भावित ग्राहकहरूलाई दृश्यात्मक बनाउन सपना देखाउँछन्. यसैले तिनीहरू एक परिष्कृत मार्केटिंग अभियान सञ्चालन गर्छ जसमा खोजी इन्जिन अनुकूलन, सोशल मिडिया मार्केटिंग, backlinks पीडित उत्पादन, र यति समावेश गर्दछ. यदि तपाइँ सँग एक व्यापक दर्शक संग साझा गर्न केहि छ भने, तपाईंलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ.
लिङ्क इमारत खोज ईन्जिन अनुकूलन को सबै भन्दा महत्वपूर्ण भागहरु मध्ये एक हो. इनबाउन्ड लिङ्कहरू खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणी र संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छन्. तिनीहरूले तपाईंको सामग्रीलाई तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई देखिने बनाउँदछ र तपाईंको व्यापार ब्यापारलाई लगानीमा बढाउनेछ.
बिल्डिंग इनबाउंड लिङ्कहरू एक रॉकेट विज्ञान होइन तर प्राधिकृत उच्च पीआर साइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्छन् एक नयाँ नौसिखियाको लागि धेरै जटिल. सौभाग्य देखि, वेब मा धेरै पेशेवर dofollow बैकलिंक जनरेटर अवस्थित छन् साथ नै खोज इन्जिन अनुकूलन सलाहकार र लिङ्क बिल्डर्स, जो उच्च पीआर साइटहरु ले गुणवत्ता लिंक रस प्राप्त गर्न मा मदद मिलेगी जो.
यस आलेखमा, म तपाईसँग केही सुझावहरू कसरी साझेदारी गर्नेछु कि कसरी नि: शुल्कका लागि ब्याकलिंकहरू dof लाई उत्पन्न गर्न. यसबाहेक, यहाँ तपाईंले केहि उपलब्ध डाइफाइक ब्याकलिङ्क साइटहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन बाह्य लिङ्कहरू अझ बढी सहज बनाउने प्रक्रिया बनाउन सक्छ.
वेब स्रोत जो backlinks जनरेटरहरु को रूप मा सेवा गर्छन
यहाँ तपाईं वेब स्रोतहरु को एक सूची मिल जाएगा जहाँ तपाईं एक छोटो अवधि को भित्र मुफ्त dofollow बैकलिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. म यस प्रमुख वेब स्रोतहरु को बारे मा माइक्रोसफ्ट, फेसबुक, Google, र यति को बारे मा कुरा गर्न जाँदैछु.
हामी यी स्रोतहरूको बारेमा कुरा गर्न सुरू गर्नु अघि, म उल्लेख गर्न चाहन्छु कि दुई प्रकारका ब्याकलिङ्कहरू छन् - dofollow र nofollow. केहि उच्च PR साइटहरू यी लिंक प्रकारहरू - Google+, YouTube, र अन्य प्रदान गर्दछ. यसको विपरीत, लिङ्क्डेन र फेसबुकको रूपमा यस्तो लोकप्रिय सामाजिक प्लेटफार्महरू केवल nofollow ब्याकलिंकहरू निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ.
छोटो छ, dofollow ब्याकलिङ्कहरू हुन् जुन जुन एक स्रोतबाट लिङ्क रस पास गर्दछ र एक विशेष कुञ्जीपाटीले वेबसाइट रेट बढाउन मद्दत गर्दछ।. Dofollow Backlinks ब्रान्ड प्राधिकरण बनाउन र Google लाई कसरी सम्मानित वेब स्रोत बनाउन सक्षम बनाउनुहोस्. Nofollow ब्याकलिङ्कहरू जुन लिङ्क हुन् जुन कुनै लिङ्क रस पास गर्दैन र तपाईंको पेज रैंकमा असर गर्दैन. तथापि, उनीहरूले अझै पनि तपाइँको ब्याकलिङ्क प्रोफाईल बलियो बनाउन सक्दछन् यदि उनी उच्च पीआर वेब स्रोतहरूबाट आउँछन्.
माइक्रोसफ्ट (2 9)
माइक्रोसफ्ट एक महत्वपूर्ण र प्राधिकृत वेब हो। स्रोत जो कि दुनियाभरका प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै मान छ. यसैले यसको उच्चतम पेजरैंक छ. यस साइटबाट इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्दै, तपाइँ आफ्नो ब्रान्ड प्राधिकरण बढाउनेछ र गुगलको आँखामा वेबसाइट प्रतिष्ठा बढाउनुहुनेछ.
माइक्रोसफ्टबाट backfollow backlinks उत्पन्न गर्न, तपाईंलाई निम्न चरणहरूमा जानु आवश्यक छ:
माइक्रोसफ्टमा नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्. (2 9)
लग यिनी गर्नुहोस र प्रोफाइल सेक्शन मा जाएँ. (2 9)
खुला लिङ्क सेक्सन र लक्षित लंगर पाठमा तपाईंको लिङ्क थप्नुहोस्. (2 9)
यो प्रक्रिया पूरा गर्न, "बचत" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्. (2)
गुगल प्लस (2 9)
गुगल प्लस एक सामाजिक सञ्जाल हो Google द्वारा स्वामित्व गरिएको. यी चरणहरू पछ्याएर तपाइँ यस स्रोतबाट गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईको जीमेल खाता प्रयोग गरेर Google प्लसमा लग इन गर्नुहोस्।. (2 9)
तपाईंको ब्लग को लागि एक नया पृष्ठ बनाउनुहोस्. (2 9)
त्यसपछि तपाईंको पृष्ठ प्रमाणित गर्नुहोस्. (2 9)
र अन्तमा, URL खण्डमा तपाईंको लिङ्क थप्नुहोस्. (2 9)
"सुरक्षित" बटन क्लिक गर्नुहोस् Source .